Chegharia, taa, na oku nke ndi na - eso ụzọ site na Jisos | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Chee echiche taa na oku nke ndị na-eso ụzọ Jizọs
Mbe Ọ nāgabiga, Ọ hu Livai nwa Alfiọs, ka ọ nọduru n'ulo ndi-arusi. Jizọs sịrị ya: "Soro m." O we bilie soro Jisus. Mak 2:14
Olee otu i si mara uche Chineke maka ndu gi? N'ime usoro ihe mmuta ime mmuo ya, The Imega Ime Mmụọ, St Ignatius nke Loyola gosipụtara ụzọ atọ anyị si amata uche Chukwu. .Zọ mbụ bụ ụzọ doro anya ma doo anya. Ọ bụ oge onye ahụ ga-enweta “nghọta doro anya na enweghị mgbagha” site na amara pụrụ iche sitere na Chineke. N’ịkọwa ahụmịhe a, St.
Enweghi otutu ihe banyere oku a nke Livai na ozioma nke Mark, nke edekwara na ozioma nke Matiu (Matiu 9: 9). Levi, onye a makwaara dị ka Matteo, na-ahụ maka ịnakọta ụtụ na omenala ya. Ọ dị ka ọ bụ naanị mkpụrụ okwu abụọ ka Jizọs gwara Livaị: "Soro m". N'ihi okwu abụọ a, Livaị hapụrụ ndụ mbụ ya wee bụrụ onye na-eso ụzọ Jizọs. Gịnị mere Livaị ga-eji mee ụdị ihe ahụ? Gịnị mere o ji kweta iso Jizọs? O doro anya na e nwere ihe karịrị naanị ịkpọ oku okwu abụọ nke Jizọs mere ka ọ zaghachi.
Ihe kwenyesiri ike na Livaị bụ amara pụrụ iche nke Chineke nke mepụtara n'ime mkpụrụ obi ya "nghọta doro anya na enweghị mgbagha niile". Levi maara n'ụzọ ụfọdụ na Chineke na-akpọ ya ka ọ hapụ ụzọ ndụ mbụ ya wee nabata ndụ ọhụrụ a. Enweghị mkparịta ụka dị ogologo, enweghị nyocha nke uru na ọghọm, enweghị ntụgharị uche ogologo oge banyere ya. Levi ama ọfiọk emi onyụn̄ ọbọrọ.
Ọ bụ ezie na ụdị nghọta a nke ndụ dị obere, ọ dị mkpa ka anyị mara na mgbe ụfọdụ Chineke na-eme ihe n'ụzọ a. Mgbe ụfọdụ, Chineke na-ekwu okwu n'ụzọ doro anya na nkwenye anyị nwere n'aka ma anyị maara na anyị ga-emerịrị ihe. Nke a bụ nnukwu onyinye mgbe ọ mere! Ma ọ bụ ezie na omimi a nke nghọta doro anya abụghị mgbe niile ka Chineke si agwa anyị okwu, ọ dị mkpa ịghọta na Chineke na-agwa anyị okwu otu a oge ụfọdụ.
Chee echiche taa na oku a sitere na Livaị. Na-atụgharị uche n'eziokwu ae nyere ya n'oge ahụ. Gbalia iche ihe mere ya na ihe ndi ozo chere banyere nhoro ya isoro Jisos. ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka Chineke ọ na-agwa gị ụdị nghọta a, dị njikere ma dị njikere ịza ya n'egbughị oge.
Onye m hụrụ n'anya, daalụ maka ịkpọ anyị niile ka anyị soro gị n'esepụghị aka. Daalụ maka ọ theụ nke ịbụ onye na-eso ụzọ gị. Nye m amara ịmara mgbe niile uche gị maka ndụ m ma nyere m aka ịzaghachi gị na ntụkwasị obi kpamkpam na ntụkwasị obi. Jesus ekwere m na gị.